आखिर के छ सन्नी लियोनको यो तस्विरमा, लाखौँ समर्थक क्षणभरमा झुम्मिए ! « हाम्रो ईकोनोमी
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनको एक अवतारले सबैलाई हैरान बनाएको छ । उनी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा धेरै सक्रिय छिन् । उनी आफ्नो निजी जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत फ्यानहरुका लागि साझा गर्दै आएकी छिन् ।
कोरोना महामारीपछि उनी केही समयको लागि अमेरिकामा थिइन् । झण्डै ६ महिना लामो अमेरिका बसाई सकेर उनी भर्खर मुम्बई फिर्ता भएकी छिन् । उनले यो खबर आफ्ना फ्यानहरूसँग साझा गर्दै इन्स्टाग्राममा एक तस्वीर पनि राखेकी छिन् । उडानको समयमा क्लिक गरिएको तस्वीर अहिले निकै भाइरल भइरहेको छ ।
उनी तस्वीरमा कालो टीशर्ट र कालो स्वेटशर्ट लगाएको देखिन्छ र आफ्नो कपाल खुला राखेकी छिन् । सन्नी लियोनलाई अनुहारमा कालो मास्क र कोरोना सुरक्षा गियर (चश्मा) लगाएको देखिन्छ ।
सन्नीको यो लुक एकदम राम्रो देखिएको छ । उनले चित्रको क्याप्शनमा उनले आफु ६ महिना पछि घर (भारत) फर्किएको बताएकी छिन् । क्याप्शनमा उनले लेखिन्, ‘६ महिना पछि अब घर मुम्बई फर्कने समय आएको छ । नयाँ साहसिक कार्य’ उनको यो तस्वीरलाई लाखौँ व्यक्तिहरुले मन पराएका छन् ।
सन्नी लियोन आफ्ना पति डेनियल वेबर र बच्चाहरूको साथ अमेरिकाको लागि प्रस्थान गरेकी थिइन् । भारतमा लकडाउन नखुल्दासम्म उनी अमेरिकामा नै बस्नु परेको थियो ।
युरोप र एसियामा बर्ड फ्लू फैलिँदै
युरोप र एसियामा गम्भीर प्रकृतिको बर्ड फ्लू देखा पारेको छ
सामसङले गत अगस्ट १८ मा नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी ए–०३ एस सार्वजनिक
संरक्षक परिषदको अपमान गर्ने काम स्वीकार्य हुदैन : आचार्य
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यले संरक्षक
एनआरएनए सह–कोषाध्यक्षमा युकेबाट ललित न्यौपानेको उम्मेदवारी , के छन न्यौपानेको एजेण्डा ?
गैरआवासयि नेपाली संघ एनआरएनए अभियन्ता ललितकुमार न्यौपानेले आगामी अक्टोबरमा हुन गैरहेको